ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီများမှ ? - Yangon Media Group
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီများမှ ?
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၂
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့် ကုမ္ပဏီများမှခန့်ထားလိုသည့် နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပြီး အလုပ်စတင်လုပ်ကိုင်သည့် ရက်ပေါင်းခုနစ် ရက် ကော်မရှင်ထံအလုပ်ခန့်ထားခွင့်တင်ပြရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အောက်တိုဘာ ၂ဝ ရက်က မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးဌာနခွဲမှ အထက်ပါအတိုင်း အသိပေး ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းကြေညာချက်မှာ ယခုလ ၂၁ ရက်မှစတင်အကျိုး သက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်များအား MIC ထံမှ အလုပ်လုပ်ခွင့် ပြုထားရာတွင် ၎င်းပညာရှင်များ၏ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်(သို့)ဗီဇာသက်တမ်းကုန်ရန် ရက်အနည်းငယ်အလိုမှ လာ ရောက်လျှောက်ထားမှုများရှိနေ ခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်မပြေဖြစ်ရသည့်အတွက် ယင်းကဲ့သို့အချိန်တစ်ခု သတ်မှတ်ပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန် ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးသန်းအောင် ကျော်က အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။ ”MIC မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကုမ္ပဏီတွေက Proposal စတင် ကတည်းက ဘယ်ကဏ္ဍမှာ ဘယ်နိုင်ငံခြားသားကိုအလုပ်ခန့်ပါမယ်ဆိုတာ ထည့်တင်ထားပြီးသား။ သူတို့က ရက်ရှည်အလုပ်ခန့်ထားမှာဆိုရင် အဲဒီနိုင်ငံခြားသားကို MIC က အလုပ်ခန့်တဲ့ခွင့်ပြုချက်ကို အလုပ်ခန့်ကုမ္ပဏီတွေက လာ လျှောက်ကြတယ်။ အဲလိုလာ လျှောက်တာမှာ သူတို့ကဗီဇာသက် တမ်းကုန်ခါနီး၊ တချို့ဆို ဒီနေ့လို ကုန်မယ်ဆိုမှလာလျှောက်နေကြ တာတွေရှိလို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလုပ် လုပ်နေတဲ့ခုနစ်ရက်အတွင်းမှာ လျှောက်ဖို့ကြေညာချက်ထုတ် လိုက်တာ”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်များကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ထံမှ အလုပ်ခန့်ခွင့်ကို လျှောက်ထားရာတွင် ၎င်းပညာရှင်များ မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပြီး အလုပ်လုပ်သည့်ရက်ခုနစ်ရက်အတွင်း ကော်မရှင်သို့အလုပ်ခန့် ခွင့်တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် ခန့်ထားလိုသည့်နိုင်ငံ ခြားသားပညာရှင်များအား ကြိုတင်ခန့်ထားခွင့်တင်ပြနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လာရောက် လုပ်ကိုင်သည့်နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်များသည် စီးပွားရေးဗီဇာဖြင့် ရက်ပေါင်း ၇ဝ နေထိုင်ခွင့်ရှိပြီး ဗီဇာသက်တမ်းတိုးမည်ဆိုပါက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ထောက်ခံချက်များ ဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းဖြစ်ရာ MIC မှ အလုပ်ခန့်ထားသည့်သူ ဖြစ်မှသာထောက်ခံချက်ပြုလုပ်၍ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဦးသန်း အောင်ကျော်က ”သူတို့ကဗီဇာသက်တမ်းကကုန်နေပြီး ဒီကလဲခွင့်ပြု ပေးဖို့ကို သုံးရက်လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ သူတို့ကလည်းဗီဇာသက်တမ်းကလည်းကျော်နေပြီ လဝကကလည်း MIC ကထောက်ခံချက်ပါမှတိုးပေးတာ။ သူတို့ကသက်တမ်းကျော်တဲ့တစ်ရက်တစ်ရက် ဒဏ်ကြေးဆောင်ပြီးဆောင်ရွက် နေကြတယ်။ ဒါတွေကိုမဖြစ်စေချင်လို့ ရက်သတ်မှတ်လိုက်တာ”ဟု ပြောသည်။ နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်များကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ထံမှအလုပ်ခန့်ခွင့်လာ ရောက်လျှောက်ထားပါက လိုအပသည့်စာရွက်စာတမ်းများစိစစ်ရသည့်အတွက် သုံးရက်ခန့်ကြာမြင့် မှသာ ခွင့်ပြုပေးနေခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က ခွင့်ပြုထားခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားသား ပညာရှင်သည် ခွင့်ပြုသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး(သို့)ခွင့်ပြုသက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီနုတ်ထွက်သွားလျှင် ကော်မရှင်ထံနုတ်ထွက်ကြောင်းအထောက်အထား၊ လေယာဉ်လက်မှတ် (မိတ္တူ)တို့ပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
မြောက်ကိုရီးယား အရေး အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်နှင့် တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်တို့ ဆွေးနွေးမည??
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ ထွက်ပြေးသွားသည့် ဘင်္ဂါလီများကို ပြန် လက်မခံရန် ရခိုင်မြို့များတွင် ဆန္ဒထုတ
ဒလတံတား စီမံကိန်းကို နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် Vibro Hammer ဖြင့် ပိုင်ရိုက်ဖွင့်လှစ်မည်
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ၁၁ လအတွင်း ရထားစင်းရေ ၁ ဒသမ ၅ သိန်း ဘူတာဝင် နောက်ကျခဲ့ရ
မန်းရွှေစက်တော် ဘုရား အောက်စက်တော်ရာ ရင်ပြင်သို့ ယခင်နှစ်ကထက် ချောင်းရေများ ဝင်ရောက်နေသော်
ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် လမ်းခွဲပြီးနောက် ခုနစ်ရက်တိုင်တိုင် ငိုကြွေးခဲ့ရဟု အမန်ဒါ ဖွင့်ဟ
ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တရားဝင် ရုပ်သိမ်းခံရပြီးပါက ၂ဝ၂ဝ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တော့မ
ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံ ဦးဝီရသူကို ဝန်းရံသူများက ရွှေတိဂုံစေတီတော် အောင်မြေတွင် နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ?
ပန်းပဲလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ဈေးတက်ခြင်းနှင့် ဝယ်ယူရာတွင် အဖမ်းအဆီးများ ရှိနေခြင်းကြော